पहिचानको कसिमा संस्कृतभाषा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
पहिचानको कसिमा संस्कृतभाषा
Posted by headline | ११ पुष २०७५, बुधबार ११:२४ |
आजको विश्वमा लगभग ७१०६ भाषाहरू बोलिन्छन्, यीमध्ये करिब २ हजारजति भाषा बोल्नेहरू १ हजार जनाभन्दा कम छन्, विश्वमा सबैभन्दा बढी बोलिने मेड़ेरियन– चिनियाँ भाषा हो ।
नेपाली, भारतीय, पाकिस्तानी आदि दक्षिण एसियाली राष्ट्रका मान्छेहरूले आफ्नो मातृभाषाको तुलनामा अंग्रेजीलाई बढी महत्व दिन्छन्, यद्यपि यी सबैजसोका आ–आफ्ना मौलिक भाषाहरू छन् ।
मेडेरियन विश्वका प्राचीन भाषाहरूमा पर्छ, कुनै पनि चिनियाँले ‘पुरानो भाषा’ भनेर हेला गर्दैनन्, आज कन्फुसियस सेन्टर खोलेर विश्वभरि फैलाउन कसरत गरिरहेका छन् ।
आजको मितिमा ५/७ जना मिलेर माग गर्ने हो भने चिनियाँ दुतावासले चिनियाँभाषा पढाउने शिक्षक निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ ।
चिनियाँ भाषाभन्दा संस्कृतभाषा निकै पुरानो हो, हाल विश्वभरिमा संस्कृत भाषाभाषीको सङ्ख्या जम्मा ३० हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । यी संस्कृतमध्ये कसैको पनि मातृभाषा होइन ।
संस्कृतभाषाको पहिलोग्रन्थ ऋग्वेद हो । आधुनिक विद्वानहरूले ऋग्वेदको रचनाकाल ई. पू. १५ सय भएको अनुमान गरेका छन् । केही विद्वानहरूले ई. पू. १० हजार पहिले नै ऋग्वेदहरूको रचना भएको भनी प्रमाणित गरेका छन् । वेदलाई अपौरुषेय मान्नेहरू पनि छन् ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको प्राचीन रैथानेभाषा संस्कृत नै हो । आजका मितिमा सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा बोलिने भाषाहरूमा संस्कृतको गहिरो प्रभाव मिल्छ ।
नेपाली, मैथिली, भोजपूरीमा त ५० प्रतिशत संस्कृत नै राइछाई छ भने नेवारी, गुरुङ्ग सेलो आदि भाषामा पनि २० देखि २५ प्रतिशत संस्कृत भेटिन्छ । यी भाषाहरूबाट संस्कृतका शब्द निकाल्ने हो भने भाषाको स्वरूप नै फेरिन्छ ।
संस्कृतभाषामाको पहिलो रचना वेददेखि १८औं शताब्दिसम्म निरन्तर चलि नै रहेको थियो । भारतमा अंग्रेजहरूले १८३५ म्याकेलेको शिक्षा आरम्भ भएपछि एसमा विराम लाग्यो ।
तेसपछि संस्कृतभाषामा भएका रचनाहरू थोरै छन् वा काव्य–महाकाव्य सीमित छन्, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पआदिमा संस्कृतभाषाको प्रयोग पूर्णतः समाप्त भयो ।
विगत १२ हजारवर्षसम्म संस्कृतभाषामा लेखिएका असङ्ख्य ग्रन्थहरू छन् । विद्वानहरूले संस्कृत भाषामा लेखिएका पुस्तकहरूको सङ्ख्या ५७ हजारसम्म भएको अनुमान गरेका छन् ।
माइतीघरस्थित आर्काइ सेन्टरमा मात्र करिब ९ हजार हातेकिताबहरू प्रकाशनको लागि प्रतीक्षारत छन्, भने ब्रिटिश पुस्तकालय र तेहाका अन्य पुस्तकालयहरूमा आज पनि हजारौं संस्कृतका किताबहरू रहेको लेखक आफैंले देखेको र हेरेको छ ।
भारतीय पुस्तकालयहरूमा पनि यत्तिकैको सङ्ख्यामा हस्तलिखित किताबहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । व्यक्तिगत कलेक्शनमा रहेका अप्रकाशित पुस्तकहरूका विषयमा अनुमान नै गर्न सकिन्न ।
नेपालमा भने संस्कृत(भाषाको दुर्भाग्य २००७ देखि आरम्भ भएको हो ्र विश्वमा लोकप्रिय हुँदै गरेको साम्यवादले नेपाली समाजमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा जन्मायो । यी यी दूबै राजनैतिकधारहरूको स्रोत साम्यवाद नै थियो ्र यी दुवै विदेशीराजनैतिक अनुयायीहरूले ूसंस्कृतूको विरोध गर्नुमा आफ्नो भविष्य देखे ।
नयाँविचार राख्ने राजनैतिक दलहरूले ‘संस्कृतभाषा’लाई जातिवादी, छुवाछुतवादी, पुरातनवादी र बाहुनवादको स्रोतका रूपमा अतिरञ्जित गरे । विश्वको प्राचीनतम् जीवित भाषालाई ‘मृतभाषा’को पगरी गुथाए । अंग्रेजभक्त भारतीयहरूले जुनबाटो अपनाएका थिए, ठीक त्यहीबाटो नेपाली राजनैतिकशक्तिहरूले अवलम्वन गरे ।
राजा महेन्द्र तथा वीरेन्द्रको शासनमा पनि पश्चिमाको प्यारो बन्न संस्कृतभाषाको मान मर्दैन गर्दै १०२७ सालमा नयाँशिक्षानीति आरम्भ गरे । यो शिक्षानीतिले संस्कृतभाषालाई भाषाकोस्तरबाट तल झारेर ‘कर्मकाण्ड वा बाहुनवाद’को भाषामा स्थापित गर्‍यो ।
त्यसपछिका सरकारहरूले संस्कृतभाषाको तेजोवध गर्नमा आफ्नो शक्ति लगाए । कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीहरूले संस्कृतभाषाको दोहन गरे । राजा वीरेन्द्रले झारोटार्न स्थापित गरेको संस्कृतविश्वविद्यालयलाई राजनैतिक झगडाको केन्द्र बनाए ।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा मिलोमतो मै ‘झगडा, तालाबन्दीूको नाटकमञ्चन गर्दै संस्कृतको प्राकृतिक उत्थानमा तगारो हाल्ने गरिन्छ । एस्तो नाटकबाट जनता वाक्क भएका छन् ।
बौद्ध, हिन्दू तथा जैनहरूको घरमा जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रयोग गरिने संस्कृतभाषाप्रति हिन्दू, जैन, बौद्ध कसैले पनि न्याय गर्न सकेको देखिन्न । बौद्ध तथा हिन्दू विद्वानहरू नै संस्कृतको जरो काट्न प्रेरित गर्ने र काट्न अग्रसर हुने दुर्भाग्यशाली नेपाल नै हो । भारतीयले जे–जेस्तो गरे त्यसको ठ्याक्कै नक्कल गर्नु पर्ने किन ?
राजनीतिज्ञ र तथाकथित आधुनिकशिक्षामा दीक्षित भएकाहरूले आलोचना गर्ने ‘पुरोहित’हरूले नै इमान्दारीपूर्वक संस्कृतलाई बोकेर हिँडिरहेको यथार्थ हो । संस्कृतको आधिकारिक ज्ञान भएका पुरोहितहरू थोरै होलान् तर अल्पज्ञानी भएतापनि संस्कृतलाई भित्रैदेखि माया गर्नेहरू कर्मकाण्डी पुरोहित नै हुन् ।
संस्कृतभाषा र संस्कृतिको रक्षाका लागि स्वस्फुर्तरूपमा खुलेका गुरुकुलहरू र संस्कृतविश्वविद्यालयलाई समेत उपरोक्त पुरोहितकै सन्तानले धानिरहेका छन् भन्दा कत्ति फरक पर्दैन । चर्कोस्वरमा संस्कृतको कुरा गर्ने तर आफ्ना सन्तानलाई अंग्रेजी विद्यालयमा पढाउने गरेको तीतोसत्य पनि हाम्रै समाजको यथार्थ हो ।
यदि संस्कृतले विकसित गरेको सभ्यतालाई कसैले जीवित राखेका छन्, भने ती गाउँकै ब्राहमण नै हुन् । गाउँले कर्मकाण्डी बाहुन नै हुन् । शहरिया पुरोहितले आफुले पुरोहित्याई गरे पनि आफ्ना सन्तानलाई कथंचित कर्मकाण्डको छाँया पनि पर्न दिंदैनन् । गाउँले पुरोहितहरू नै संस्कृतका यथार्थरक्षक हुन् ।
आज नेपालको राजनीतिमा पहिचानको ठूलो वहस चलिरहेको छ, नाक, छाला र भाषाभाषीका आधारमा सरकार बन्ने बिग्रने गरेका छन् । तर यो सबैबीच रैथानेभाषाहरूलाई अंग्रेजीकरणले खर्लप्प निलेको छ ।
नेपालका राजनैतिककर्मीहरू चर्कोचर्को स्वरमा अधिकार र पहिचानको कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा आफ्नै धर्म, संस्कृति, भाषाआदिको जरो काट्ने क्रियाकलापहरूलाई खुलेआम सघाउँछन् । नेपाली भाषालाई गालीगलौज गर्न अंग्रेजीको प्रयोग गर्छन् । नेपालीलाई विस्थापित गरेर अंग्रेजी लाद्छन् । संस्कृतको विरोध गरेर के उनीहरूको मातृभाषा जोगिन्छ ?
अंग्रेजहरूलाई संस्कृतभाषासँग ठूलै रिस छ । किनभने संस्कृतसाहित्यमा भएका विशेषताहरूले जहिले पनि अंग्रेजी डोमिनेट हुन्छ । संस्कृतको जानकार कुनैपनि विद्वानले अंग्रेजीबाट ‘कोट’ गर्न सक्दैन ।
सबैले संस्कृतलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन । संस्कृतसँग सरोकार नभएकाहरूले संस्कृत पढ्नैपर्छ, जान्नैपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन । तर जुन माटोबाट संस्कृतको जन्म भएको हो, त्यसै माटोमा जन्म लिनेहरूले यसको विरोध गर्नु भनेको ‘आत्महत्या’ गर्नुसरह हो । ‘जुन थालमा खाइन्छ, त्यसैमा दूलो पर्नेहरू आमाका हत्यारा हुन् ।’
अंग्रेजी भाषा जान्नैपर्छ तर आफ्नो मौलिकभाषा मासेर अंग्रेजी सिक्नेपक्षमा मरिमेट्नेहरूमा नेपाली सबैभन्दा अगाडी छन् । नेपाल यस्तो दुर्भाग्यशाली देश हो जहाँका विद्यालयमा मातृभाषा बोल्दा विद्यार्थीले दण्डित हुनुपर्छ । आमाबुवाले पनि मातृभाषामा बोल्न प्रयत्न गर्ने आफ्नै बालबालिकालाई दण्डित गर्न विद्यालयहरूलाई उक्साउने गर्छन् ।
नेपाल होस् वा भारत संस्कृतप्रति घृणा फैलाउने काममा सबैभन्दा बढी राजनैतिज्ञहरूको भूमिका रहेको छ । साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद आदि खेमामा विभाजित राजनीतिको स्रोत विदेश हो । स्वभावतः विदेशीसोँच विकसित हुनुभनेको स्वदेशी विस्थापित हुनु नै हो । नेपालमा यस्तै भएको छ । राजनीतिज्ञहरू मिलेर स्वदेशीलाई विस्थापित गरेका छन् ।
संस्कृतजस्तो मौलिक र सबैविधामा सम्पन्न भाषालाई ‘पुरोहित्याई’को भाषाका रूपमा झार्ने काममा लोभीपुरोहितहरू र निर्लज्ज राजनैतिक व्यवस्थाको समान भूमिका छ । पुरोहितले आफ्नो लोभको लागि संस्कृत जान्नबाट अरूलाई रोक्ने अनि राजनीतिज्ञले संस्कृत बाहुनकोभाषा हो भनेर सर्वसाधारणलाई संस्कृतबाट विमुख बनाउने ?
मैले संस्कृत त अंग्रेजी दुवैभाषा पढेको छु । नेपाली मेरो मातृभाषा हो । संस्कृतलाई ‘बाहुनको भाषा हो, कर्मकाण्ड’को भाषा भएको आरोप लगाउनेहरूलाई खुला चुनौती छ– ‘संस्कृतलाई पुरोहितको भाषामात्र हो भनेर सिद्ध गर्नुहोस् ।’
सन् १५२३ भन्दा पहिला अंग्रेजीभाषामा केवल इसाईग्रन्थहरू लेखिन्थे, तर यही समयावधिसम्म संस्कृतभाषामा भने साहित्य, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा, यहाँसम्म कि कामशास्त्र पनि लेखिएका थिए । संस्कृतको खेदोखन्नेहरूले संस्कृतको ‘स’सम्म जानेका हुँदैनन्, अंग्रेजहरूले अनुवाद गरिदिएको संस्कृतग्रन्थ अंग्रेजीमा पढ्नेहरूले मात्र संस्कृतको खैरो खन्छन् । सबै अनुवादहरू खराव छैनन् ।
संस्कृत पढेर, बुझेर संस्कृतको आलोचना गर्दा चित्त बुझाउनुपर्छ । तर अरूले भनेको आधारमा आफ्नै ‘आधार’ काट्नेहरू अन्धकारमा जकडिएका प्राणी हुन् । आफ्नै जरो काटिँदा खुसीहुने बज्रमूर्खहरूसँग के नै आशा राख्न सकिन्छ र ?
संस्कृतभाषालाई पहिचानविरोधी भएको आरोप लगाउनेहरू बज्रमूर्ख हुन्, यदि संस्कृत र संस्कृतसाहित्य पहिचनाविरोधी भएको भए नेपालबाट १२३ भाषाहरू र ती भाषाबोल्ने समुदायहरूको धेरै पहिले अन्त्य हुने थिएन र ? सन् २०१८ मा पनि यी सबैभाषाहरू र भाषाभाषीहरू जीवित छन् । संस्कृत सबैभाषाहरूको उत्थानको सहयात्री हो भन्ने यो नै बलियो प्रमाण होइन र ? संस्कृत सह–अस्तित्वको भाषा हो भने संस्कृतभाषा जान्नेहरू वैश्विकअस्तित्वमा विश्वास गर्ने हुन् ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंले संस्कृतको निन्दा गर्नुस्, आलोचना गर्नुस् तर एकपटक संस्कृतभाषा बुझ्ने अवश्य प्रयत्न गर्नुस् । संस्कृत असजिलो भाषा पटक्कै होइन । हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूमै राइछाई संस्कृत छ । हामीले खेल्दाखेल्दै, सुन्दासुन्दै संस्कृत सिक्न सकिन्छ । अलिकति परिश्रम गर्यौं भने विश्वको सबैभन्दा प्रगतिशील र धनी संस्कृत–साहित्यमा हाम्रो पहुँच बढ्छ ।
अंग्रेजी सिक्नुस्, चाइनिज सिक्नुस्, फ्रेन्च सिक्नुस्, जुनभाषा सिकेपनि राम्रै हो । यदि हामीले संस्कृतभाषा सिक्यौं भने हामीले आफ्नो बारेमा धेरै बुझ्नेछौँ । विश्वास गर्नुस्, यदि हामी–तपाईंले संस्कृतभाषा नपढी–नबुझी मर्‍यो भने विश्वको सर्वोत्तम र आफ्नै जरोकीलो नबुझी जीवन बिताएको अपराध गर्ने छौँ । असंस्कृत जीवन बिताएकोमा पछुताउने छौँ ।
अन्त्यमा, जाति, वर्ण, भूगोलआदिको बन्धनले संस्कृत उन्मुक्त छ । संस्कृतमा सबैको साझा अधिकारको भाषा हो । एकपटक संस्कृतको ज्ञान भएपछि तपाईं नै भन्नुहुने छ ‘संस्कृत सबैको साझाभाषा हो, जुन छुवाछुत तथा दासताको’ संस्कृतिबाट उन्मुक्त छ र सबैको कल्याणको कामना गर्छ । सबैलाई कर्तव्यशील भएर जीवन व्यतीत गर्न उत्प्रेरित गर्छ ।
साभारः नेपालपुर ।
Previousसरकारलाई कसैको रोकतोक छैन : नेता पौडेल
Nextकेन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका प्रमुख, आइजीसहित उच्च प्रहरी अधिकृत कञ्चनपुर प्रस्थान
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अनिश्चितकालिन ताला
२९ जेष्ठ २०७४, सोमबार १९:०१
रिसाएकी प्रेमिका फकाउन के गर्ने ?
२९ चैत्र २०७३, मंगलवार १७:०२
अनेरास्ववियुद्वारा पोखरा बिश्वबिद्धालयलाई पन्ध्र दिने अल्टिमेटम
२३ श्रावण २०७४, सोमबार ०९:१२
व्यक्तिविशेषका वर्णविन्याससम्बन्धी मतमतान्तरले भाषाको हित हुदैन
८ आश्विन २०७३, शनिबार १४:५०